Moscow - IRussia ingelinye lamadolobha amadala kakhulu yempucuko futhi izwe. Imisebenzi ukunikeza ukufinyelela inzuzo kwi-Inthanethi Kwenziwa eziningi kakhulu inkampani enkulu hhayi. Phakathi imidondoshiya of emakethe - inkampani "MGTS", inkampani ephethwe "MTS". Yiziphi izici izinkonzo ezenziwa corporation-aspect kwenhlangano ka Ukufinyelela i-Inthanethi kanye namasevisi ahlobene?
"Yedolobha YaseMoscow Ucingo Network" - enye yezindawo ezinkulu kakhulu e Russian dolobha wireline opharetha. Njengamanje le nkampani inikeza ngamasevisi ngocingo, Ukufinyelela i-Inthanethi kanye neziteshi digital TV, kanye eziningi namasevisi ahlobene.
"MGTS" - inkampani enomlando omude. Ngokwemibiko ethile, yasungulwa ngisho ngesikhathi Tsarist iRussia ngo 1882 - ke eyokuqala kwavulwa Kuznetsky Iningi eMoscow ngocingo esiteshini. Manje umninimasheya elikhulu "MGTS" - kuyinto "MTS" nezinkampani ezingaphansi kwayo.
Enye yemikhiqizo edume kakhulu inkampani - kusuka ku-intanethi "MGTS" (fibre). Izibuyekezo le sevisi atholakala anhlobonhlobo. Manje ukufinyelela kunethiwekhi njengengxenye lo mkhiqizo isetshenziswa amakhulu amaningana ezinkulungwane ababhalisile eMoscow. "MGTS" inikeza izinhlobo ezifanayo izinsiza izinhlangano ezingokomthetho.
Kwaphela isikhathi eside main nobuchwepheshe bezokuxhumana kunethiwekhi amanethiwekhi "MGTS" babe iziteshi DSL-ngocingo. Kodwa kancane kancane ozuza isimo ehola omunye okukhipha indlela ku-inthanethi - GPON kusukela "MGTS". Izibuyekezo ngakho sisonke libonise ukuhlolwa omuhle abasebenzisi isici ekushintsheni ubuchwepheshe ukufinyelela. Iqiniso lokuthi ngokusebenzisa GPON-iziteshi esetshenziswa ifomu okumsulwa fibre evumela ukudlulisa idatha ngesivinini esikhulu.
Usizo - emikhulu futhi wehlukile
Kusukela 2009, i- "MGTS" inikeza ngamasevisi e-ingxenye-Play Kathathu esekelwe zamanje ingqalasizinda Inthanethi. Kube isevisi "TV ye-intanethi." "MGTS", ukubuyekezwa izinga okuyinto buvezwa amasevisi eziyisisekelo hhayi kuphela - ukufinyelela kwenethiwekhi, kodwa futhi-aspect amasevisi eyengeziwe, ibhekwa Muscovites eziningi umphakeli onokwethenjelwa okuqukethwe kwi-TV yesimanje. isiteshi spectrum ngaphakathi amaphakethe tariff kusuka ku-ISP ngokwanele ahlukahlukene. Ngawo lowo nyaka, i-intanethi kumhlinzeki wesevisi "MGTS" (izibuyekezo abasebenzisi abaningi lwaleli isinyathelo kahle kakhulu) waqala ukuthengisa izinkonzo ukufinyelela kwenethiwekhi ku "format Boxed." Ukuthenga ke, iklayenti ungaqala ukusebenzisa i-intanethi umane ngokuxhuma imishini computer, futhi ngaphandle ukukhathazeka mayelana izilungiselelo. Nakuba amasevisi amaningi evela kwabanye abanikezeli zidinga ezimweni eziningi shayela master ngoba umsebenzi okuhambisanayo ne imishini.
Empeleni, imishini njengengxenye amasevisi okukhulunywa ngakho, ngisho libukeka ibhokisi, ahlotshiswe isitayela ezinkampani inkampani. It has a Ukufundwa sasivumela okunethezekayo ngisho inkombandlela umsebenzisi ongenalwazi sendlela ukuhlela ikhaya ku-intanethi. "MGTS" (impendulo amakhasimende amaningi athi mayelana nokuhlolwa omuhle kakhulu lesi sici) kwakufanelekile, "ezipakishiwe" ubuholi ukuze bayisebenzisela kungaba, ngaphandle asebenzise iqembu ukwesekwa.
Nakuba isidingo contact centre "MGTS" ungahlala shayela - inombolo lakhe "ibhokisi". Umsebenzisi - imakwe Umhlahlandlela, kanye njengemodemu. It ngokuvamile libhekisela uchungechunge isabelomali, kodwa kedivaysi, njengoba kwaphawula u-ochwepheshe abaningi, ngempela ezingeni.
amasevisi UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki, njalo ethembisa
Phakathi kwezinye izinkonzo esiphawulekayo "MGTS" - isevisi "Control Zomzali". Ngalo abadala angakwazi ukuqapha ukusetshenziswa Inthanethi kwezingane - ukuvumela ikakhulukazi noma ekwenqabeleni ukungena ku-inthanethi ngezinsuku ezithile namahora. Ubuchwepheshe isebenza nge "MGTS", kuyinto elokhu ivela, kanjalo, ekwindla ka-2014 e-imithombo ehlukahlukene yokwaziswa sengathi umhlinzeki uzimisele nokuqalisa algorithm eziyinkimbinkimbi sokuba ukuhlaziywa traffic Inthanethi. Lolu hlobo ubuchwepheshe kuzovumela, kulindeleke ukuba ngempumelelo amaphakheji zokuhlunga inthanethi. Iphinde eqala ukubandakanywa wakhe njengoba ithuluzi lokumaketha.
Masitadishe ehilelekile kancane ngaphezulu phezu ubuchwepheshe besimanje kunazo, lapho-ISP eMoscow inikeza ukufinyelela i-Inthanethi, - GPON kusukela "MGTS". Umsebenzisi ukubuyekezwa, njengoba sibonile ngenhla, lwaleli uhlobo lolwazi isiteshi njengokuba ijubane eliphezulu kakhulu. Isibalo elihambisana kungase ngisho abasebenzisi ekhaya Inthanethi ukufinyelela amakhulu megabits / umzuzwana. Nokho, okusezingeni eliphezulu idatha isilinganiso - lokhu akulona inzuzo kuphela GPON (ebuye ibizwe ngokuthi "Dzhipon") ukuze ubuchwepheshe odlule.
Nathi - esitebeleni
Lapho ukuzibandakanya kufinyelelwa GPON-isiteshi nokwethenjelwa ukuzinza kwakwakhe. Disconnections, "beka phansi" kanye nezinye izinkinga nobuntu ngaphambi ubuchwepheshe izinhlobo amanethiwekhi usebenzisa ama-fiber optic, aziyona into evamile. Enye emangalisayo ithuba GPON - kungaba ifakelwe anhlobonhlobo amasevisi eyengeziwe, okuyinto, empeleni, kusenza kubhekwe umhlinzeki eMoscow. Inthanethi "Dzhipon" kusukela "MGTS", ukubuyekezwa zazo kakhulu bubonisa ukuthi okungenhla kuchazwe izinzuzo ubuchwepheshe - hhayi nje, kodwa kuyinto eyenzekayo, kulekelelwa inani elikhulu nezinye izinsiza ezikhona amakhasimende. Ukuxhumeka kwenethiwekhi Kwenziwa nge imodemu umsebenzisi, ngokuvamile enikeziwe "MGTS" iqashwe. onobuhle yamanje amadivaysi abafanele avumele ukuba uye ku-inthanethi nge-Wi-Fi. Lokhu kusho ukuthi inethiwekhi ungaya kusuka kumadivayisi eziningana.
Yiqiniso, ngisho kulo muzi yempucuko like eMoscow, zikhona izindawo nekhaya lapho fibre ongakabi bakwazi ukufika noma ngokomthetho kungenzeka ukuxhuma wonke umuntu kuye lapho. Kulokhu, uhlele ekhaya inthanethi "MGTS" inikeza amaklayenti ayo ngokusebenzisa ADSL-ukufinyelela. Ngomqondo onabile, iningi izidingo abasebenzisi lanamuhla, lobu buchwepheshe uyakwazi ngokugcwele ukuhlangabezana. Ikakhulukazi, ngokuphathelene aspect isivinini - ADSL ukuzibandakanya kungenzeka ukufezekisa target of 7-8 megabits, noma ngisho nangokwengeziwe. Ukuhlola amakhasi, amavidiyo, ukulalela umculo, ikhuluma "Skype" lena ngempela ngokwanele.
Main - ifoni Ukugunda
ADSL-ubuchwepheshe ine inzuzo kule isici lula - njengoba isiteshi ukuxhumana usebenzisa wamanje line zocingo. Akubalulekile, njengoba kunjalo ne GPON, ukukhweza okuthé xaxa. Kulokhu, njengoba enjalo, ifoni uhlala ukusebenza - amasignali imodemu digital kuhlungwa idabula encane ixhunywe kwinethiwekhi. Kulokhu, ucingo koshayayo Ngeke uzwe amasignali zangaphandle ekhiqizwa ADSL-imodemu.
Cabanga ukushaja izimiso wasisekela opharetha eMoscow emakethe sasivumela ukuncintisana. Njengoba kufakazelwa ezinye izibuyekezo umsebenzisi, inthanethi "MGTS" Mayelana njengoba inkonzo iwuhlelo. Ngakho, yimaphi amaphutha bese yezinqumo ezingeni ukushaja kungenzeka engathandeki - amakhasimende kalula uye kwelinye umhlinzeki, okuyinto ngazo zonke esifundeni inhlokodolobha kakhulu. Phakathi izici eziphawulekayo kakhulu ukushaja "MGTS" isici - Postpaid isistimu yokukhokha. Okungukuthi, ungakwazi lokuqala ukusebenzisa inethiwekhi, bese ukhokha invoyisi - nokuthi ngezindlela eziningi.
Ngenxa umehluko kwezobuchwepheshe phakathi GPON i ADSL-TV izimiso tariff maqondana ngamunye kubo ngaleso "MGTS" ezahlukene.
ADSL-ukufinyelela kungadla eshibhile kakhulu - isibonelo, kukhona inketho ukuxhuma kwi-Inthanethi ngoba ruble 150 ngenyanga. Nokho, ijubane kulokhu kuyoba iphansana - 3 megabits.
Ngakwelinye ihlangothi, izinga engabizi kakhulu GPON-uxhumano kusukela "MGTS" - ruble 300 ngenyanga ngesilinganiso 15 megabits.
umthetho Jikelele kokubili yamanani - the ezibizayo isiphakamiso ukhonkolo, eshibhile izinga ukwanda uma ukuyibeka kwezinye megabits.
Kodwa, njengoba sibonile ngenhla, empeleni esetshenziswa at the ophumayo ku-intanethi kusukela "MGTS" fibre (izibuyekezo abasebenzisi eziningi ukuqinisekisa ke) ayikwazi ukunikeza ukukhuphuka okukhulu ijubane ukulayisha amakhasi. ngoba nje imininingwane efanele traffic Inthanethi kuhilela hhayi ukudluliselwa esiningi idatha.
Umgwaqo ohlongozwayo "MGTS" yamanani Inthanethi - ukubuyekezwa amakhasimende amaningi uyakufakazela lokhu - ezincintisanayo ngokwanele, nakuba, njengoba avuma Ochwepheshe abathile, zikhona abaningana abahlinzeki eMoscow, ngaleso amanani efanayo ukufinyelela ijubane nokuzinza sezixhumanisi ngezansi. Nokho, "MGTS" banganikeza kukho lapho ukushaja kwakungeke kwenzeke ngenyanga futhi nsukuzonke. Abasebenzisi abaningi umxhwele ithuba. Iya ku-inthanethi kuphela kungenzeka ngalezo zinsuku, lapho empeleni kudingeka ukufinyelela. Khokha ngenyanga kulokhu akudingekile.
On wonke, i-abasebenzisi omuhle kakhulu iqondiswe ukubhekana umhlinzeki enkulu Ukufinyelela i-Inthanethi "MGTS" ukubuyekezwa. Moscow - umuzi lapho ukuncintisana phakathi abahlinzeki ngokwanele eqinile. Ngakho-ke, uma degree of omuhle ikhasimende inhliziyo, kungaba inkomba yokuthi impumelelo senkampani. Futhi lokhu kungenxa yokungabikho, ngokusho kongoti, kuba tariff Inqubomgomo ezikhangayo lomhlinzeki.
Omunye amathuluzi eziyisisekelo ukuxhumana "MGTS" futhi abasebenzisa i-Internet - i-inthanethi service "I-akhawunti yami". It eMoscow-ISP ikhasimende angathola lonke ulwazi olufanele eziphathelene noma yimaphi amasevisi esetshenziswa noma Yahlela ukusebenzisa. Ngokusebenzisa amathuluzi kusebenziseka kalula inthanethi, ungaphatha amasevisi.
Siye safunda izici eziyinhloko ubuchwepheshe kanye lokukhokhisa amasevisi omunye nezinkampani zokuxhumana ngobukhulu eMoscow, ukuze bagcine degree womaya, aqukethe ukubuyekezwa. Inthanethi "MGTS", njengoba sishilo ngenhla, umbono eziningi IT-ochwepheshe cabanga njengenye amasevisi ukhiye. Nokho, kuyoba usizo ukuhlola amathemba ukumaketha kanye brand ukukhuthazwa ezokuxhumana emakethe inhlokodolobha sika.
Ngokusho kwezazi ezithile, inkampani silungele bahlanganise isimo sayo njengomholi omunye abahlinzeki ehola yokuxhumana enhloko-dolobha yaseRussia. Ikhaya Inthanethi "MGTS", i-TV, wefoni fixed, njengoba izazi zikholelwa kanye nabasebenzisi abaningi abashiya amazwana inthanethi thematic - kukhona namasevisi anikelwe ngumhlinzeki ngesikhathi inhlanganisela elikhulu ikhwalithi yamanani.
Kunobufakazi bokuthi "MGTS" uhlela ukuthatha cishe isigamu sezindela emakethe broadband eMoscow ngo-2016. Kanjalo isabelo semali engenayo kusuka ukuhlinzekwa amasevisi afanele kuyoba ngu-60%. Njengengxenye lelisu, "MGTS" ukuphathwa ihlele amboze GPON-inethiwekhi zonke izindawo eMoscow, okuyinto ekhona futhi inikeza amasevisi. Ngaphezu kwalokho, njengoba kufakazelwa Izibuyekezo kwesokunxele ngochwepheshe, inthanethi "MGTS" ihlele ngenkuthalo azitholi nje kuphela kubantu kodwa futhi izinhlangano. Nokho, ukufinyelela ku-intanethi ngeke kuzosungulwa kwamanye amasevisi, ezifana, isibonelo, ukuthi amafu asibekela, ikakhulukazi, izinqubomgomo zokubalwa, kanye ibamba.
Ngaphezu kwalokho, njengoba kufakazelwa atholakala imicabango yabantu uchwepheshe umphakathi kanye nokubuyekeza, inthanethi "MGTS" ubona njengoba ehamba phambili, kodwa hhayi kuphela abalulekile ngokoMthetho isu lembulunga yonke amasevisi ukuthuthukiswa kwebhizinisi. Kunemibiko ukuthi inkampani uhlela ukuthatha isikhundla ekuholeni futhi emakethe TV digital, ukwandisa ingxenye yayo kule ingxenye ku-26%.
Umncintiswano - injini intuthuko
izinkampani True ukuncintisana, izazi zikholelwa izozama lukhulu umhlinzeki eMoscow akusebenzanga bonke abenza kahle njengoba kwakuhleliwe. Futhi lokhu naphezu kweqiniso lokuthi "MGTS" eliphakeme zobuchwepheshe zokuxhumana ingqalasizinda. Eziningi zalezi abahlinzeki elikhulu eMoscow, okuyizinto mncintiswano ngqo "MGTS" ngenkuthalo ukuthuthukisa amandla awo. Ngokwesibonelo, kukholelwa ukuthi umncintiswano eqinile GPON ubuchwepheshe esetshenziswa "MGTS" kungase kwenze abanye phambili izindinganiso zokuxhumana, ezifana, isibonelo, DOCSIS. Ziyakwazi abanye abahlinzeki eMoscow ufunde ngentshiseko.
Uyini degree womaya yempendulo ikhasimende "Yedolobha YaseMoscow Ucingo Network"? Umsebenzisi Izibuyekezo kungenziwa cishe oluthathwa ngezindlela eziningana.
Eyokuqala iphathelene inqubomgomo tariff lomhlinzeki. Ngokuphathelene izimpendulo zakhe kunalokho kokungathathi hlangothi: kulolu hlangothi, akunakwenzeka ukusho ukuthi amakhasimende ukucabanga "MGTS" ukuthi amanani mikhulu elinye - kukhona nezinkampani zokuxhumana ezinikeza amanani wokuncintisana kakhudlwana.
Elinye iqembu Izibuyekezo libhekene nokwenza kwayo. Imibono lapha atholakala ezahlukene kakhulu. Ezibucayi ibonisa ukuthi ukuntengantenga ezithile isiteshi ku-intanethi isici usebenzisa ifayela ethandwa ibamba, zomsebenzi. Nokho, kule umbono kukhona okuphikisa, okuncike phezu kwesisekelo sokuthi ukuvulwa umthwalo yangempela izinga zokuxhumana kulokhu okwengeziwe kumnikazi wewebhusayithi kuka "MGTS". izimpendulo Positive libonise ukufinyelela ngesivinini ukuze iningi izinsiza Inthanethi, ping ubuncane (impendulo phakathi isicelo kanye Impendulo yeseva), uxhumano nokusimama. Ngezindlela eziningi, yile ndlela nawe ozizwa, njengoba izazi zikholelwa kungadalwa nje inzuzo efanayo iziteshi fiber-optic zokuxhumana, esebenzisa "MGTS".
Obunye e nomkhakha we imicabango yabantu ikhasimende kubonise izinga bokusebenza umhlinzeki. Imibono zihlukile, kodwa ngokuvamile igcine lizinga omuhle izilinganiso. Lokhu kungenzeka kubangelwa, ngokuvumelana abahlaziyi, lo mncintiswano abaphakeme esikhathini iwuhlelo wemboni eziqasha abasebenzi, "MGTS". Uma into zokubhalisa akawuthandi ukuxhumana nethimba lokusekela, masinyane anganquma ukushintsha ISP.
Hlobo luni sevisi "Dlulisa Hambayo" "megaphone" linikeza bamasizo?
Bobunjwa be-Jomethri izingane: imidlalo nezinsiza zemfundo
Wamafutha ngesisekelo ukulungiselela "Akriderm" - yokusetshenziswa
Amagama avelele izinhlobo nokunikelwayo
Inani labantu base-Kaluga futhi isimo lokubala ubuningi babantu komuzi
Vereshchagino edolobheni, Perm esifundeni. Umlando kanye ukubaluleka kwezomnotho
Isifuba somoya bronchial e ingane: ulwazi incazelo